Wait & Waitress | Kross Asia Co.,Ltd ﻿
Wait & Waitress
16.7.2018, Full time , Food & Beverages / Catering
Company: Kross Asia Co.,Ltd
Work location အမှတ် ၁၆၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ မေခအိမ်ရာ၊ သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Company Industry: Wait & Waitress
Job posted: 16/7/2018
554 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	ရုံး၏ Maintenance နှင့်ပတ်သတ်သောကိစ္စရပ်များအားဆောင်ရွက်ရန်။ •	ရေလိုင်း၊မီးလိုင်း၊ အဲကွန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စရပ်များအားဆောင်ရွက်ရန်။ •	Maintenance ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရပါမ� ...
We are looking for quality and talented applicants to fill our vacancy. If you are self – motivated individual withahigh level of initiative and dedication. So warmly welcome invite you to join us.
Total manpower were over 200 and domestic three branch. We are aims best Quality - Thai authentic Service – feel at home Atmosphere in simple Thai authentic style - Great Value - through building successful culture based , innovative and professional working Environment.
Kross Asia Co.,Ltd was established in March – 2013 asaTHAI POT restaurant . Kross Asia is focused hospitality on quality of food supplied. We offer high quality, healthy food and good services.
• စားသုံးသူများသို့ ရောင်းချနေစဉ်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ိထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း မိမိစားသောက်ဆိုင်၏ အရောင်းဧရိယာတစ်ခုလုံးအား အဆင်ပြေချောမွေ့မှု ရှိစေရန် စီမံကွပ်ကဲ ထိန်းသိမ်းရမည်။ • ဆိုင� ...
•	ဆိုင်တစ်ခုလုံး၏ အရောင်းဝင်ငွေများ၊ အသုံးစရိတ်အတွက် ထွက်ငွေများ အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင် ထားရှိခြင်း၊ ဆက်စပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအား သေချာစွာ သိမ်းဆည်း၍ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း၊ သတ်မှတ်လုပ်ထံ� ...
• ကုမ္ပဏီ၏ အရောင်းဆိုင်ရာ၊ ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ၊ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ စားသောက်ဆိုင်၏ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် စသောအကြောင်းအရာများကို ၀န်ထမ်းများအားလည� ...
579 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Daily Attendance များနေ့စဉ်စစ်ဆေးရန်။ •	၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ လစာပေးခြင်းကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။ •	ဝန်ထမ်းရေးရာရုံးစာများနှင့်ရုံးအမိန့်များအား ဌာနတာဝန်ခံ၏ညွှ� ...
Wait & Waitress Hotel & Restaurant jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Kross Asia Co.,Ltd Hotel & Restaurant Jobs Hotel & Restaurant Jobs Wait & Waitress Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(9880)
Work in Yangon Region(2074)
Work in Mandalay Region(757)
Work in Bago Region(156)
Dagon Glory Co., Ltd.(779)
Waiter/Waitress M/F (3)
Tanintharyi Region 49 Days
Yangon Region 125 Days
Naypyitaw City 126 Days
Tanintharyi Region 156 Days